Uyicacisa njani imithombo oyisebenzisayo kumanqaku akho kwaye ulumkele iiPCPs | Iindaba zeGajethi
ÉOku yeyona post imfutshane kwimbali emfutshane ye VinagreAssino.com kwaye oku kungenxa yokuba endiza kukuxelela kulula kakhulu kwaye andizukuziqengqa ngendlela endiqhele ngayo.
TWonke umntu onebhlog yakhe uyazi ukuba "Kopa & uncamathisele" ngumyalelo wosuku Kwaye bambalwa abathi emva kokupapasha inqaku elibonwe kwenye indawo kwibhlog yabo "Bayalibala" ukukhankanya imithombo yabo. Kulungile njengoko isitsho Antonio Banderas Kwintengiso kaViceroy "Eli nqaku lelomnye umntu".
RKuya kuvela ukuba ndihlala ndifunda ukuba ifayile ye- imvelaphi yoqobo, Kodwa ndiyabona ukuba uninzi lweendawo kukho umkhwa wokukhankanya indawo ebisebenza njenge niselo. Ndiyakholelwa ukuba enye ibalulekile njengenye. Kucacile ukuba ukukhankanya ireferensi akukho nzima, kodwa uyazi njani xa ufikile kumthombo? Wazi njani ukuba umntu odibanisa njengomthombo wokuqala akazithinteli ekukopisheni ngaphandle kokushiya izingqinisiso?
EItyala kukuba kufuneka ndipapashe inqaku endilenzileyo ukusuka kwiposti endiyibonileyo kwiComputer eSebenzayo kwaye ndayibona indlela enikezela ngayo izingqinisiso kwiBitelia, le yona ke yanika izingqinisiso Sleeves Green, le ukuya kwi J-hamba kwaye oku ku Iibhlog zeUrsi´s. Isalathiso sokugqibela sabonakala ngathi Ibhlog kaUrsi, yomhla kaNovemba 24, ndiye ndacinga ukuba le yayingumthombo wokuqala.
PKodwa ke ndaye ndanombuzo ophakanyisiweyo apha ngasentla, ngaba u-Ursi uza kukopa ngaphandle kokushiya izingqinisiso? Kwangoko ndacinga ukuba u-Ursi uyi-PCP (hayi, sukuphazama, I-PCP imele uKhuphelo oMsulwa kunye noCola, okanye uKhuphelo oluCokisekileyoUcinga ntoni?
CVula umxholo wokuqala weposti ka-Ursi kwaye ujonge Uphando ngalo mtya wokubhaliweyo kunye Yothusa !!. Elinye iphepha liyavela, uKris Abel, onomgca ofanayo wokubhaliweyo, onesihloko esifanayo seendaba kunye nomhla ngaphambili (ngoNovemba 1) kunokupapashwa kwesithuba sika-Ursi (Novemba 24).
Dlo nto I-Ursi elungileyo yiPCP kulawulo olupheleleyo kwaye akabonisi nezalathiso okanye mhlawumbi babhale nje umgca ofanayo "Unokukhetha kuBantu, ilitye eliqengqelekayo, iNational Geographic, iThamsanqa, iMidlalo ebonisiweyo, ixesha, iPlayboy kunye neVogue isihloko esinye "Mag Ipiki Yam". ?
Lokanye isihloko besingakhange sibonakale singaqhelekanga kum, bendicinga ukuba yinto eyenzekileyo, kuba bonke bebethetha ngento enye, kodwa loo mgca wesicatshulwa unokufana kuphela ukuba u-Ursi wayekope uKris okanye ukuba uKris no-Ursi babekope ukusuka kwelinye icala. Mhlawumbi ukuba loo mgca wesicatshulwa ukhutshelwe kwiphepha elalithetha ngalo wonke umntu, sinokuyikhupha ukuba yayiyikopi phakathi kweebhlog kodwa Omnye ummangaliso !!, umgca wokubhaliweyo awubonakali kwi Ndibuyile kungahambeki okanye kujonge indawo.
Dfter ukuzama iindlela ezahlukeneyo zokukhangela ukufumanisa ukufana phakathi kwezi bhlog kunye ezahlukeneyo, andifumananga enye into. Ke andinandlela yimbi ngaphandle kokukhetha phakathi kwezi zinto zine:
I-Ursi yayinethamsanqa elibi ngokukhetha umgca wokubhaliweyo kunye nesihloko esifana nesapapashwa kwiintsuku ezingama-23 ngaphambili nguKris kwaye ungumthombo wetyathanga elifike eSpain.
U-Ursi uyi-PCP, wazikopa ngokungafihlisiyo eKris kwaye akashiya zalathiso.
U-Kris ngumthombo wetyathanga (owaphuke u-Ursi) ophele wafikelela eSpain.
IiKirs zikope iindaba ezivela kwenye indawo ngaphandle kokwenza "ikopi kunye nokuncamathisela" ke ngoko akashiyanga mkhondo.
Nokanye ndiyazi ngawe kodwa indinika ukuba u-Ursi ukhe watyelela ibhlog kaKris, kodwa andinabo ubungqina obuqinisekileyo, njengoko bendizakutsho I-Perry Mason "Ubungqina buyimeko."
VNdiyilibale imvelaphi yeli bali lipheleleyo, injongo yam yayikukunika ityala kubo bonke abo babenze ukuba iindaba zifikelele kum. UKUYA Ulwazi olusebenzayo ngokuba kulapho ndiyifumene khona, ukuya IBitelia ngokuba, ubuncinci ndicinga njalo, umsasazi omkhulu weendaba ngeSpanish, Sleeves Green Ngokumzisa eSpain ngoku IUrsi ngokuba yimvelaphi yetyathanga, umthombo. Ndifuna ukwenza into enje:
Imithombo: IKhompyuter eSebenzayo >> IBitelia >> Sleeves Green >> J-hamba >> IUrsi
PKodwa emva kokufumanisa ukuba umthombo ungaphambi kweUrsi ndacinga ukuba kungangcono ukuba ndiyisuse kuluhlu kwaye ndibandakanye uKris, kodwa oku ngekhe kulunge ngaphandle kokwazi ngokuqinisekileyo ukuba ikhona ikopi okanye akunjalo, kwaye nangayiphi na imeko Kananjalo kunokwenzeka ukuba uKris nokuba wayengeyiyo iPCP ngewayethathe iindaba kwenye indawo kwaye ngekhe azishiye izingqinisiso. Kuba iyakuba yintoni ukunika umntu ongekho sikweni sokunika abanye udumo. Umhlophe oluma umsila.
BEwe emva kwayo yonke le nto ndiza kukunika izigqibo zam. Into yokuqala kukuba le ayizukuba "yeyona ndawo imfutshane kwimbali emfutshane yeVinagreAsesino.com." Kuyabonakala ukuba bendinento endifuna ukuyithetha kodwa khange ndicinge ukuba ndizakuqengqeleka kakhulu (njengoko ndihlala ndisenza ngaphandle kokuba ndenze iposti malunga neePhephadonga). Okwesibini luluhlu lweembono zam malunga uyichaza njani imithombo yolwazi esetyenzisiweyo:
1) Soloko uqhagamshela indawo apho ufunda khona iindaba. Ayinamsebenzi ukuba "ikopi kwaye uncamathisele" okanye hayi. Ukhethe le ndawo (mhlawumbi yayinguGoogle) ukukwazisa kwaye unombulelo kuyo ngolwazi lweendaba.
2) Ukuba uyazi ukuba ngowuphi umthombo wokuqala, kufuneka unxibelelanise nawo. Akwanelanga ukunxibelelana nomthombo wakho wolwazi, ukuba unolwazi lokuba ngubani odale inqaku kufuneka unike ikhredithi. Ukudala kuthatha iinzame, ikopi kwaye uncamathisele ngu "Ctrl + c" kunye no "Ctrl + v", akukho enye into. Masixabise iinzame zabo benza amanqaku kwaye sonke siya kuba nezinto esinokuzikopa okanye sizisebenzise ukubhekisa okanye ukuphefumlelwa.
3) Ngaba la makhonkco mabini anele?. Ukusasaza iindaba kubalulekile, ukuzihambisa ukusuka kwelinye ilizwekazi ukuya kwelinye kunye nokuziguqulela kubalulekile. Ukwandisa ulwazi ngeposti efundwe kwenye indawo okanye ukuyiphucula nayo kufuneka ithathelwe ingqalelo. Ingxaki kukuba, njengoko ubonile (ufunde) kweli nqaku "lifutshane", akukho lula ukwazi ukuba yeyiphi into ehambelana nenye nganye, kwaye ngamanye amaxesha ifuna umzamo omkhulu wophando. Ingcebiso yam kukuba ayikhe ibabuhlungu ukunika izingqinisiso. Xabisa umzamo wento nganye, umgangatho wenqaku kunye nexesha ozimisele ukuchitha ngalo ubulela (ubhekisa) kwimigudu yabanye ukuze ezi ndaba zikufikelele.
4) Lumkela iiPCPs. Ukunganiki izingqinisiso akulunganga, kodwa ukunika umbono kwi-PCP kubi kakhulu. Ingxaki kukuba kunzima kakhulu ukwazi ukuba ngubani umbhali wenqaku, ngakumbi ukuba liqale ngolunye ulwimi esingaluqondiyo. Apha ndingacebisa kuphela ngononophelo kwaye ndinike ingxelo ngeendawo zePCP ezinganiki zingqinisiso.
ENdingavuya ukuxoxa nawe, kumagqabantshintshi, umahluko wakho ngokubhekisele kwinto echazwe apha. Isidiliya kunye nemibuliso ekubhekiswa kuyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyicacisa njani imithombo oyisebenzisayo kumanqaku akho kwaye ulumkele iiPCP
Mnu Euro sitsho
«Le yeyona posti imfutshane kwimbali emfutshane yeVinagreAsesino.com» Indoda !!! Ewe, ngethamsanqa mfutshane! Ngoku ukuba uyandazi, uyazi ukuba ndihlala ndihamba «Umthetho womzamo omncinci», nangona kunjalo, kuye kwamnandi ukukufunda, kwaye ayizukuba kukugqibela !! !
Phendula kuMnu Euro
Ndiyavuya ukukubona apha, usozigidi. Konke okugqibelele.
Ukuhleka koburharha sitsho
Kuya kuba yimfuneko ukutsala ikona yeendlebe zakho ukubeka ukwaziswa kokungena kwakho ekunokwenzeka ukuba kuya kuba yeyona ndawo imfutshane, kwaye ufumane isithuba esixineneyo, esigcwele "imvuthuluka" kwaye kutheni ungayitsho, inomdla. Kwakungeyomfuneko ukusicoca ngaloo ndlela, umsebenzi olungileyo wophando uJavi, umnqwazi wam ucimile.
Ndibona umnikelo unomdla kakhulu, kwaye njengoko sele besitsho ngentla, ewe mhlekazi, ndiyayikhulula.
Yigcine kwaye ikhule le nto.
Ewe, imfutshane, ewe. Ngokufutshane kodwa kakhulu, Siyavuyisana neVinegar. Sisithuba esinomdla.
Ndihlala ndizama ukubeka umthombo apho ndiwubonile khona, okanye eyona ndicinga ukuba yeyona iphambili, kubonakala kum ngathi yeyona nto inncinci onokuyenza emva kokuba bekukhuthazile iposti yakho ... kunye Ikopi ehlanganisiweyo / iipasta zixhomekeke kwizinto endicinga ukuba azilunganga kwaphela ... ungabeka isicatshulwa kunye nekhonkco kwisithuba sokuqala, ukuze nabani na achithe ixesha lakhe esenza "okuhlala kuyinto eninzi" fumana umzuzwana omncinci wozuko
Ndihlala ndicaphula umthombo apho ndibone khona iindaba, ewe, andisoloko ndikhankanya umthombo wokuqala, imikhwa kuya kufuneka itshintshwe. OKANYE :)
Ewe kunjalo, kufuneka nditsho ukuba enkosi ngokukhankanya imithombo yezinto ezivela kwezinye iiblogi endizibonileyo enkosi kwiinjini zokukhangela ndibenethamsanqa lokudibana nabantu abalungileyo kwaye siye saba ngabafundi abafanayo bebhlog zethu.
Ke ukucaphula, ukongeza ekusebenziseni ukwazisa ngemvelaphi yenqaku, kunceda ukudibana nabantu abaninzi. 🙂
Kukho amaxesha apho ndingazi ukuba ngowuphi umthombo wokuqala, ngamanye amaxesha ndikhetha ukubeka indawo apho bendiyifunde khona okokugqibela 🙂
Xa kukho imithombo emininzi, ngamanye amaxesha andibeki 😛 (andazi ukuba kulungile).
Ngesinye isihlandlo, emva kokupapasha inqaku, kwavela umntu othile ebanga isizathu sokuba ndingadibenanga njengomthombo wokuqala. Inyani yile yokuba khange ndiyityelele nebhlog yakho, nangaphezulu, into endiyipapashileyo ndayiqokelela kwiindawo ezahlukeneyo.
UDogguie kuya kufuneka ubuncinci ubalule umthombo wokuqala apho ufumene khona iindaba, ke uya kuthintela nabani na ekubanga njengoko usitsho ukuba sele yenzekile kuwe. Ndicinga ukuba inqaku liyacaca ukuba kutheni kubalulekile ukukhankanya, nokuba ayingombhali wokuqala, kwaye kwimeko yakho, iphepha elihlekisayo, kubaluleke ngakumbi kuba phantse yonke into oyipapashayo (imifanekiso, iziqhulo, iziqhulo , ..) yenziwe ngomnye umntu.
Ukuba ukhe wathandabuza kuba zininzi iziza, beka iimbekiselo ezimbalwa kwaye uphilisiwe empilweni, engabizi mali ingako ukunika ityala 😉 Umbuliso.
Inqaku elihle kakhulu, kunye nomsebenzi ophando olungileyo kakhulu. Ngokwesiqhelo ndihlala ndibhekisa kwindawo apho ndifumana khona iindaba, kuba, ukuba sihlala sifuna ukuya kumthombo wokuqala, ngamanye amaxesha kufuneka sibize abantu beCSI. Inqaku elilungileyo.
Molweni nonke, ndiyaxolisa ngokwazisa "ukukopela" endikuphosileyo, kodwa ndakholelwa 😉
i-rubisf ayiphosakalanga malunga nokudityaniswa kwekopi, kodwa ukuba sinika iphepha-mvume lomxholo ukuze uvunyelwe yinto ekufuneka siyicinge, okoko nje izingqinisiso zicacile. Enye into ngabo bayakopa, musa ukunika izingqinisiso kwaye uhlala kwindawo yakho. Ndiwabonile amaphepha anombhalo opheleleyo wenqaku ngu Emezeta kubandakanya nezimvo, apho ndivele khona. Kwaye umnini wephepha wawaguqula amagama am ukuze kubonakale ngathi ndithetha naye, endaweni kaManz (umphathi kaEmezeta). Kuyamangalisa!
IJuMaFaS njengoko usitsho, ukucaphula kuyindlela elungileyo yokunxibelelana nebhlog.
Enkosi ngamazwi akho words
Molo mhlobo womdiliya, NdinguEscroto_Roto umphathi wewebhu wenfermos.com
Okokuqala ndiyavuyisana nawe kuyilo lwewebhusayithi yakho, inyani kukuba intle kakhulu kwaye enkosi ngezimvo kwiwebhusayithi yam.
Inyani yile yokuba ngaphezulu kwesihlandlo esinye ndizifumene ndikwimeko yokuba nezinto ezandleni zam ezibonakalayo ezivela kwiindawo ezininzi kunye nangaphezulu kwesinye ziqinisekisile ukubhalwa kwayo. Ekuqaleni ndibeka izingqinisiso ngemvelaphi yendawo endiyifumene kuyo (ewe, ubuncinci kwenye yazo), kodwa ngandlela ithile akulunganga ukudibanisa iwebhusayithi kwaye ungadibanisi nabanye xa bobabini besebenzisa izinto ezingezizo ezabo (okanye ubuncinci awunakuyiqinisekisa), ngenxa yoko ndonele yile meko, ndenze amacandelo amabini ahlukeneyo kwiwebhusayithi yam: «Ukubonakaliswa kweNfermo» apho ndibeka khona ngokucacileyo izinto zam kunye ne-«Classics ze-Intanethi» apho ndibeka khona igama «zakudala» ezidubule kakhulu kwi-intanethi kangangokuba kwaziwa nokuba ngubani umbhali kwaye kumaxesha amaninzi baphela befika ngeposi.
Kuya kufuneka kuthiwe, njengoninzi lweebhlog, ndiye ndaphela ndiyikopi-yokuncamathisela ukutya kwaye ngaphezulu kwesihlandlo esinye ndizifumene zonke izithuba zam kwezinye iiblogi, kwaye kufuneka nditsho ukuba akukho zikhombisi okanye umbulelo ndinikwe mna.
Nditsho ukuba kwizihlandlo apho ndikwazile ukuqinisekisa ukuba izinto zazivela kumbhali wewebhusayithi, andithandabuzi ukubhekisa iwebhusayithi kwaye ngamanye amaxesha, nangona ingeyiyo eyam impahla, yaphule ikhonkco ukunceda umntu iwebhusayithi endiyithandayo, ukuba umhlaba wokubhloga kunzima kwaye kufuneka sincedane.
Andiqengqeli, amathamsanqa ngewebhusayithi yakho ...
Iphukile_ Isikram (^ _ ^)! Iviniga yokubulala amandla!
Molo abagulayo, enkosi kwaye wamkelekile
Umcimbi wemithombo unzima ngokwenene, njengoko usithi akunakwenzeka ukunika izingqinisiso "kwi-Intanethi yakudala" kwaye akukho sisombululo silula kuloo nto.
Ndiyavuya ukukubona apha. Imibuliso yeVinegary.
Ndinabantu abakhuphele amanqaku am ayiyonto inkulu, kwaye abade batshintshe ukuthunyelwa kule meko kulungile ukuba ndizuze ezinye ngezi ndawo, kodwa kubuhlungu, ukuba oku kwenzeka rhoqo.
Umgangatho ofanelekileyo kukujongana nabo.
Umm, andikho kumkhwa wokulandela umkhondo kwimvelaphi yoqobo nokuba (nangona ndizama ukukhankanya indawo endiyibone kuyo).
Emva kokufunda le dissertation, kubonakala kum ukuba ndiza kuchitha ixesha elininzi ndifumana umthombo wokuqala ukuze ufumane ukufaneleka kwawo.
Lucia Ndonwabile ukuba ulithandile i-adventure yokulandela umzila wePCP 🙂
Waka Vinegar !! Onjani umsebenzi wophando owenzileyo, ndiyavuyisana nawe, ndibenexesha elimnandi lokufunda eli nqaku. Uye wakwazi ukundinqamula okwethutyana kwizinto zam zobuhlanya 😉
Ndikubonile oku kakhulu kumaphepha apho abantu basebenzisana nemibongo yabo, apho eminye imigca ekopishwa ngokungaginyisi mathe kunye / okanye egcwalisa izitanza, abanye bakopa "umbono" kwaye "bawuhlengahlengise" ukuze ubonakale wahlukile kumbongo wokuqala .. kuyamangalisa ukuba bayila into engenamsebenzi kuluntu olubonakalayo
yintoni mama kwenzeka ntoni kuwe kutheni esihogo ulifakile iphepha lakho vinagreeeeeeeeeee aaaaaaaa umbulali hahahahaha
Ndize apha ngegoogle. Ukujonga ngokuchanekileyo ukuba siqhubeka njani ukubonisa imithombo apho sithembele ekwenzeni ungeniso oluthile. Ngaba yenza ikhonkco nje? Andiyiqondi kakuhle le nkqubo ngokwayo. Nceda undixolele kwangoko ukungaziphathi kakuhle. Enkosi.
Ndifuna undenzele igrafiti, utsho uKaren